काभ्रे च्याल्टीको महादेव मन्दिर: निर्माण गर्न तछाड मछाड, संरक्षण गर्ने कोहि भएनन् – मिलिजुली खबर
काभ्रे च्याल्टीको महादेव मन्दिर: निर्माण गर्न तछाड मछाड, संरक्षण गर्ने कोहि भएनन्
केही बर्ष अघिसम्म हरेक बिहान घण्टी बज्ने काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर ५ च्याल्टीमा रहेको महादेव मन्दिर अहिले सुनसान छ । कतिपयको त बिहानीको निन्द्रा यहि मन्दिरमा बजेको घण्टीको आवाजसंगै खुल्थ्यो ।
तर अहिले मन्दिरमा बिहान-बिहान घण्टीको आवाज सुनिँदैन । माकुराको जालोले मन्दिर जेलिएको छ । मुसाको राम्रो बासस्थान बनेको छ ।
टाढाबाट हेर्दा मन्दिरको रंग रोगन राम्रै देखिन्छ । तर मन्दिर परिसर पुग्दा धार्मिक स्थल भन्न पनि नसुहाउँदो छ । यो मन्दिर बनाउन तछाड मछाड भयो । तर मन्दिर निर्माण भएपछि न त स्थानीय सरकारले चासो दियो न त स्थानीय बासिन्दाले नै ।
कसैले चासो नदिँदा घर छेउको धार्मिक स्थल बेसाहारा बनेको छ । धार्मिक आस्था र विश्वासको धरोहर मन्दिर वरपर उस्तै फोहोर छ । सफा गर्ने कस्ले ? संरक्षण गर्ने कस्ले ? मन्दिरको पछिल्लो अवस्था हेर्दा लाग्छ । दर्शन गर्न भक्तजन नै जाँदैनन् ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाको २५ किलोको होटलमा आग'लागी
सिन्धुपाल्चोक: ह'त्या गरी धनमाल चो'री गर्ने तीनै जना युवा का'रागार चलान